‘किम्फले धेरै फिल्म मेकरलाई बाटो बनाइदिएको छ’ | Makalukhabar.com
‘किम्फले धेरै फिल्म मेकरलाई बाटो बनाइदिएको छ’
हिमाल एशोशिएसनको आयोजनामा भोलिबाट राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय माउण्टेन फिल्म फेष्टिवल हुँदैछ । सन् २००७ बाट सुरु भएको काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय माउण्टेन फिल्म फेष्टिवल (किम्फ) को १६ औँ संस्करणमा ३१ देशका ७० फिल्म प्रदर्शनमा आउँदछन् । किम्फमा प्रदर्शनमा आउने फिल्महरू मूल धारका फिल्म भन्दा फरक र यथार्थपरक हुने गर्दछन् ।
छोटा, डकुमेन्ट्री फिल्मले ब्यवसायीक सफलता हासिल नगरे पनि यस्ता फिल्मका छुट्टै दर्शक रहेको किम्फ आयोजक हिमाल एशोशिएनका अध्यक्ष वसन्त थापाको भनाई छ ।
थापाका अनुसार नेपालमा करिब डेढ दशकदेखि फरक धारमा फिल्म निर्माण भइरहेका छन् । नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा आदिका विषयमा बनेका थुप्रै फिल्मले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा कमाएर पुरस्कृत समेत भएका छन् । किम्फले नेपाली फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म लैजान ठुलो भूमिका निर्वाह गरे पनि सरकारी तवरबाट कुनै सहयोग नभएको थापाको ठहर छ ।
१६ औँ किम्फ, फरक धारका नेपाली फिल्मको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय बजार लगायतका विषयमा अध्यक्ष थापासँग मकालु खबरका लागि केशव सापकोटाले गरेको कुराकानीको संक्षेपः
नेपालमा फरक धारका फिल्महरूको फेस्टिवलको आवश्यक्ता किन देखियो ?
यसलाई बैकल्पिक धार भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ जहाँ छोटा र डकुमेन्ट्री टाइपका फिल्म प्रदर्शन हुन्छन् । यस्ता फेष्टिवलले दर्शक र सिनेकर्मीलाई बेग्लै विषय बस्तुहरूमा फिल्महरू हेर्ने मौका दिन्छ ।
विभिन्न देशहरूबाट छानिएर आएका फिल्महरू अरुबेला हेर्न नपाइने, फिल्म मेकरले नयाँ कुरा हेर्न र सिक्न पाउने तथा एक्सपोजर बढ्ने, दर्शकहरूको पनि रुचि रिफाइण्डमेन्ट हुने भएकोले नेपालमा माउण्टेन फिल्म फेष्टिवलको आवश्यक्ता देखियो । यसले एउटा देशको संस्कृति, रहनसहन तथा विषय अर्को देशमा एक्पोज गराउन पनि सहयोग पुग्छ ।
फरक धारका फिल्म केका लागि बनाइन्छ ?
घाटै खानका लागि भनेर यस्ता फिल्म बनाइँदैन । केही न केही कतैबाट खर्च उठाउने प्रयत्न हुन्छ । विदेशका धेरै देशहरूमा यस्ता फिल्म बनाउन निकायहरू छन्, जसले नयाँ फिल्म, डकुमेन्ट्री बनाउन सहयोग गर्छन् । कतिले आफ्नै लगानीमा आत्म सन्तुष्टिका लागि पनि बनाउँछन् ।
फरक धारका फिल्म भनेको फिल्म मेकरको अभिव्यक्ति, विचार देखाउने माध्यम पनि हो । जसले समाजमा रहेका विषयलाई एक्सपोज गर्न चाहन्छ, त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहस होस भन्ने चाहन्छ । तसर्थ यस्ता फिल्मले व्यापारिक हिसाबले नाफा कमाउने उद्देश्य राख्दैनन् ।
डकुमेन्ट्री फिल्म ब्यवसायीक हुन सकेका छैनन् । डकुमेन्ट्री फिल्मले विषयको उठान गर्न सक्छ ।
नेपालको हिसाबमा कुरा गर्दा यहाँ बनेका फरक धारका फिल्मको उद्देश्य के देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा जति पनि फरक धारका फिल्म बने तिनले केही न केही उद्देश्य लिएकै छन् । हामी कहाँ सुरुमा पैसा नकमाउने फरक धारको फिल्मको सुरुवात भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा धेरै राम्रा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम र दाम कमाउने फिल्म पनि आएको पाएका छौँ ।
उदाहरणका लागि दीपक रौनियारको सेतो सूर्यले उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍यायो । यसमा किम्फ उसको लागि प्रस्थान विन्दु भयो । यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।
फरकधारका फिल्म विषयका हिसाब र समयका हिसाबले पनि हलमा चल्न सक्दैनन् । डकुमेन्ट्री फिल्म ब्यवसायीक हुन सकेका छैनन् । डकुमेन्ट्री फिल्मले विषयको उठान गर्न सक्छ ।
फरक धारका फिल्म मेकरहरु आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिन नसक्नुको कारण के हो ?
यो धेरै कुरामा भर पर्छ । केही छन् जो निरन्तर यो क्षेत्रमा लागिरहेका छन् । दीपक रौनियारको नाम लिए, मोहन मैनाली एउटै फिल्ममा रोकिनु भएन । केसाङ क्षेतेनले लगातार फिल्म बनाइरहेका छन् । ध्रुव बस्नेत, रमेश खड्का, दीपेन्द्र भण्डारीले पनि आफ्नै किसिमले फिल्म बनाइरहेका छन् ।
मीन बहादुर भाम कालो पोथीले चर्चामा आए पनि त्यो भन्दा अगाडी नै बाँसुरी बनाएर चर्चामा थिए । छिरिङ रितार जो मूलधारका फिल्म पनि बनाउँछन्, डकुमेन्ट्री र फिस्कन फिल्म बनाइरहेका छन् ।
कतिको यो मूल व्यवसाय भएको छ, कतिले शौखका रूपमा बनाउँछन् त, कतिले आर्थिक कारणले पनि बनाउन सकिरहेका छैनन् । सबैलाई एउटै क्याटोगोरीमा राखेर हेर्न मिल्दैन । किम्फले धेरै फिल्म मेकरलाई बाटो बनाइदिएको छ ।
अहिले बनिरहेका मेनस्ट्रिमका फिल्महरूमा पनि फरक धारका फिल्मले प्रभाव पारिरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ ।
नेपालमा फरक धारका फिल्म बन्ने क्रममा यो क्षेत्र कत्तिको ब्यवसायीक बन्न सफल भएको छ ?
मैले अघि पनि भनिहालेँ, कतिले यसलाई शौखका रूपमा लिएका छन्, कतिले मूल पेशा नै बनाएर बसेका छन् । कसले कसरी काम गरिरहेको छ, त्यो हामीलाई जानकारी हुन्न ।
यस्ता फिल्मको उपादेयता के भन्ने सन्दर्भमा अहिले बनिरहेका मेनस्ट्रिमका फिल्महरूमा पनि फरक धारका फिल्मले प्रभाव पारिरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ ।
उदाहरणका लागि चलनचल्तीका फिल्म भन्दा फरक भएर आएका लुट, झोला, टलकजंग भर्सेज टुल्के, पशुपति प्रसाद, जात्रा । यिनीहरू मसला फिल्म भन्दा फरक भएर आउनुमा फरक धारका फिल्मले प्रभावित बनाएरै हो । यो हेर्दा अहिले हाम्रो प्रयासले समाजमा केही परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने लाग्दछ । यसले फिल्म फेष्टिवल गर्न हामीलाई प्रोत्साहित पनि गरेको छ ।
दर्शकको कुरा गर्दा मूलधार बाहिरका फिल्म हेर्ने दर्शक कस्ता छन् ?
हामीले सुरुमा किम्फ गरिरहँदा धेरै जसो विदेशी नै थिए । नेपाल घुम्न आएका टुरिष्टहरु, कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरू मात्रै हुन्थे तर, अहिले बिस्तारै नेपाली दर्शकहरू बढ्दै जाँदा फरक धारका फिल्म पनि बन्ने क्रम बढ्दै गयो ।
अहिले विदेशी भन्दा नेपाली दर्शक धेरै हुन्छन् । कतिपय फिल्म दोहोर्याएर देखाउनु परेको छ, कति फिल्ममा सुरक्षाका लागि प्रहरी गुहार्नु परेको पनि अनुभव छ ।
यस्ता फेष्टीवलमा कस्ता प्रकारका दर्शक आउन जरुरी छ ?
फेष्टीवल सबैका लागि हो । तर, हाम्रो जोड र चाहना युवाहरूको सहभागिता बढी होस भन्ने छ । त्यो किन भने, युवाहरूको फिल्म प्रति आफ्नै रुचि हुन्छ । उनीहरूमा केही गर्ने चाहना हुन्छ । त्यसमा राम्रो फिल्म हेर्ने रुचि बढोस् भन्ने हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई हेर्दा नेपालमा बनेका फरक धारका फिल्महरू कत्तिको रुचाइएको पाउनु भएको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली फिल्मलाई सजिलो चैँ छैन । विदेशमा गएका नेपाली फिल्महरूले सामाजिक, सांस्कृतिक विषय वस्तुहरू बोकेका हुन्छन् । विदेशमा बनेका फिल्म जस्ता बाहिर हलमा चल्ने हुँदैनन् ।
हाम्रा फिल्महरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा, विभिन्न फेष्टिवलमा सहभागी हुने, विदेशी टेलिभिजनमा राइटस बिक्री गर्ने, पुरस्कृत हुने सम्भावना भने छ ।
के थाहा भोलि उनीहरू आजको प्रोत्साहन र हौसलाले सत्य जित रे बनेर पो निस्कन्छन् ! यहाँहरूको उपस्थितिले फिल्म मेकरलाई हौसला दिन्छ ।
नेपाली फिल्महरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक्सपोज हुन नसक्नुको कारण के होला ?
फरक धारको होस वा मूलधारको फिल्म, हामीले निर्माण गरेका फिल्महरू प्राविधिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म भन्दा कमजोर हुन्छन् । प्रविधिमा हामीसँग दक्ष जनशक्ति नै छैनन् । विषयवस्तु छनौटमा पनि दक्ष जनशक्ति छैन । त्यो सँगै प्रोत्साहनको पनि कमी छ ।
प्रतिभालाई पनि उजिल्याउनु पर्छ । हिरालाई पनि तरास्नु पर्छ । हामी कहाँ त्यस्तो अनुकूल वातावरण छैन ।
तपाइहरू निजी क्षेत्रबाट फिल्म फेष्टिवल गरिरहनु भएको छ, राज्यले कत्तिको सहयोग गरेको छ ?
राज्यले हामीले चाहे जस्तो सहयोग गर्न सकेको छैन । हामीलाई आर्थिक सहयोगको खाँचो छ, राज्यले दिने कुरामा कहाँ कसले गर्ने ठोस योजना छैन । किम्फबाट नेपालको फिल्म क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउन धेरै गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
नेपालमा किम्फ गरिरहँदा विभिन्न देशका विदेशी फिल्म मेकर आउँछन् । हाम्रा फिल्म मेकरले उनीहरूसँग अन्तरक्रिया, छलफल गर्छन्, एकअर्कामा वार्तालाप हुन्छ, यो आफैँमा एउटा लाभ हो नि ! यसले नेपाली फिल्म लाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान सहयोग पुग्छ ।
हामी विदेशी फिल्म मेकरलाई बोलाउँछौँ, एउटा राम्रो होटल समेत दिन सक्दैनौँ । राज्यले सहयोग गरे त नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र फिल्म क्षेत्रमा समेत टेवा पुग्छ नि ।
यहाँ कस्तो सम्म छ भने, सम्बन्धित निकायमा जान समेत सकिरहेका छैनौँ । सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्रीलाई बल्लबल्ल यसको महत्त्व बुझायो, यसो सुने जस्तो गर्छन् । एकछिनमा बिर्सिन्छन् ।
यहाँ त राज्यका स्टेक होल्डरलाई तपाइहरू आउनुस्, स्वागत भाषण गर्नुस् भन्दा पनि मान्दैनन् ।
अब राज्यले के गर्नु पर्ला ?
हामीले यस्तो उस्तो भनेर बखान गर्नुभन्दा सरकारले नै मुल्याङकन गर्नुपर्‍यो । कसको के उपयोगिता हो हेरेर त्यही अनुसार सहयोग गर्नुृपर्यो । हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि चाहिने वातावरण, सहयोग नदिई केही हुँदैछ ।
हामीले अहिले जे जति गरेका छौँ, सहभागिताका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय फेष्टिवलमा जान सकौँला तर, त्यो भन्दा माथि गएर राष्ट्रका लागि गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि त राज्यले नै चलचित्र सम्बन्धी उचित नीति बनाउन आवश्यक छ ।
यसपालिको फेष्टिवलमा कस्ता फिल्महरू आउँदछन् ?
हामीसँग सबै खाले फिल्महरू छन् । विदेशी फिल्म फेष्टिभलमा कहलिएका ३१ देशका करिब ७० ओटा फिल्महरू देखाउने छौँ । यस पटक हाम्रो मूल थिम वुमेन बनाएका छौँ । त्यस्ता प्रकारका फिल्महरू पनि छन् । नेपाली फिल्मका कुरा गर्दा उद्घाटन फिल्म नै महिला निर्देशकले बनाएको फिल्म छ ।
नेपाल पानोरोमा भन्ने खण्डमा विभिन्न लेन्थका २१ ओटा फिल्म प्रदर्शन हुन्छन् । जसमा डकुमेन्ट्री र फिक्सन गरेर दुई ओटा फिल्मलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम छ ।
अन्तमा, किन किम्फमा सहभागिता जनाउने ?
यहाँ प्रदर्शनमा आउने फिल्महरू हलमा हेर्न पाइँदैन, डिभिडी पाइँदैन, युट्युबमा पनि हुँदैन । प्रदर्शन हुने फिल्म मूलधारका भन्दा फरक र नयाँ स्वाद दिने हुन्छन् । यस्ता फिल्मले दर्शकलाई नयाँपन दिने र फिल्म मेकरलाई पनि प्रोत्साहन दिने हुन्छ ।
यहाँ फिल्म बनाउने कोही पनि बुढा पाका छैनन्, सबै युवाहरू छन्, जसले बाबुको गोजीको पैसाबाट फिल्म बनाएका छन् । के थाहा भोलि उनीहरू आजको प्रोत्साहन र हौसलाले सत्य जित रे बनेर पो निस्कन्छन् ! यहाँहरूको उपस्थितिले फिल्म मेकरलाई हौसला दिन्छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व आईजीपी बोहराले पाए सफाइ
ब्रेकिङः प्रहरी र विप्लव सेना विच दोहोरो भिड्न्त
‘उपकुलपति बर्खास्त उहाँकै कारणले भएको हो, हटाउँदैमा कारवाही सकिँदैन’ स्वास्थ्यमन्त्री
उपप्रधान तथा स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव अकस्मात धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निरिक्षणमा गएका छन् । मन्त्री यादव आज विहानको फस्ट फ्लाइटमा धरान स्थित प्रतिष्ठानको निरिक्षणमा गएका हुन् । विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका मन्त्री याद... जारी राख्नुहोस...
प्रतिबन्ध लगाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन भन्ने इतिहासबाट किन नबुझेको ?
‘म डा. केसीको विरुद्धमा र निजी क्षेत्रको संरक्षणमा लागेको हैन’ विजय थापा
‘निजी मेडिकल कलेज बन्द हैन, अनुगमन गर्नुगर्छ’ भगवती चौधरी
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनकै लागि वर्षेनी हज्जारौं विद्यार्थी विद... जारी राख्नुहोस...
‘अहिले मुलुकमा विधिको हैन ब्यक्तिको शासन छ’
नेपाल तरुण दलले माघ ८ गतेबाट बर्तमान सरकारका विरुद्ध देशभर संघर्षका कार्यक्रम तय गरेकोमा १ नं. प्रदेशमा ब्यापक तयारी गरिएको छ । नेपाल... जारी राख्नुहोस...
नेपालमा संघीयता असफल हुने ७ कारण
नेपालमा संघीयता कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । यो हाम्रो आवश्यता पनि होइन, क्षमता पनि छैन । संघीयताले नेपाल र नेपालीको हित गर्देन । त्यसकारण तत्काल यसबाट फर्किनु पर्छ । संघीयताबाट फर्किए... जारी राख्नुहोस...
देश ओली र प्रचण्डमय हुनुपर्छ भन्ने सोच अधिनायकवाद हो
भुपेन्द्रजंग शाही महासचिब, नेपाल तरुण दल नेपाल तरुण दलले आउँदो माघ ८ गते देखि आन्दोलन गर्नुको कारण के हो ? जारी राख्नुहोस...
भिसिले सिनेट नबसाउने हो भने कुलपतिले सिनेट बसाउँछन्
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेपाल सरकारका जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्री पनि छन् । उनी मन्त्री भएपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गठित छानबिन तथा सुझाव समितिका संयोजक पनि छन् । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार... जारी राख्नुहोस...
१२ वर्ष अघि काठमाडौं इचंगु, स्वयंभूका विनोद कुुमार तिवारीको सपना थियो स्वदेशमै केहि गर्ने । तर, देश नै आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलिएको बेला विनोदका सपना कहाँ पुरा हुन्थ्यो र ! उनी दैनिक २ हजारको हाराहारीमा विदेशिइरहेका युवा जस्तै उज्वल भविष्यको सुनौलो सपना बोकेर भासिए अमेरिका । सन् २००६ मा अम... जारी राख्नुहोस...
दरबारमार्ग प्रहरी चुप लागेर बसेको छैनः डिएसपी मल्ल
नेपाल प्रहरीमा स्वच्छ छवि भएका निडर र हक्की प्रहरी मध्येका एकमा पर्दछन्, महानगरीय प्रहरी बृत्त दरबार मार्गका प्रमुख डिएसपी दान बहादुर मल्ल । २०५५ सालमा असई पदबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका मल्ल ३ पटक मिसनमा समेत गइसकेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री पु... जारी राख्नुहोस...